के अंकमाल गर्दा तनाब कम हुन्छ ? यस्तो भन्छ अध्ययन ! – hamrosandesh.com
कुनै व्यक्तिले कसैलाई अँगालो हाल्दा उसको रगतमा अक्सिटोसिन हार्मोन प्रवाहित हुन थाल्छ । यो हार्मोनले रक्तचाप र तनाव नियन्त्रण गर्न र स्मरणशक्ति बढाउन महत्वपुर्ण मानिन्छ । अझ आफ्नो प्रिय मानिस, प्रेमी प्रेमिका, श्रीमान श्रीमती, सन्तान वा अभिभावकसँग अंकमाल गर्दा यसले दोब्बर रुपमा स्मरणशक्ति बढ्छ । साथै तनाव कम गर्दछ ।